Nezvedu - Hebei Yidong Carbon Zvigadzirwa Co., Ltd.
Isu tinobatsira nyika ichikura kubvira 2012
Akaiswa mushonga wokuuraya Graphite electrode
Graphite electrode minyatso
Graphite yakaumbwa zvikamu
Fonera Tsigiro + 86-13212161818
Tsigiro yeemail yidongcarbon@163.com
Hebei Yidong Carbon Zvigadzirwa Co, Ltd.is inyanzvi graphite electrode inogadzira uye ekisipota kubvira 2012.Iyo iri muHandan Guta, ruwa rweHebei uko kunozivikanwa se "China Northern Carbon Viwanda Base" .Iyo traffic iri nyore uye iri padhuze kuenda kuTianjin Port.
Isu tiri nyanzvi mukugadzirisa uye kugadzira graphite electrode uye kabhoni electrode.Our zvigadzirwa zvinotengeswa mushe muChina uye zvinotumirwa kuSoutheast Asia, Middle East, Russia neAmerica.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru maGrafite elekitirodhi uye maCarbon emagetsi, ayo anogona kukamurwa kuita Akajairwa simba graphit electrode (RP), Yakakwira simba grafiti electrode (HP), Yakakura yakaiswa grafiti electrode (IP), Ultra-yakakwira simba grafiti electrode (UHP), Yakaiswa mushonga graphite block, graphite block, Calcined Petroleum Coke uye Yakakwira density kabhoni electrode.
Graphite electrode inonyanya kushandiswa kumagetsi esimbi uye calcium carbide, phosphor-makemikari indasitiri, senge simbi uye simbi yekunyungudusa muMagetsi arc chirahwe, maindasitiri silicon, yero phosphorus, ferroalloy, titania slag, brown fused alumina smelting mune yakanyura-arc tira. vane yakakwana yekugadzira tambo, iyo inosanganisira mbishi zvigadzirwa kusanganisa, calcining, kupwanya, kuongorora, kuremedza, kukanya, kugadzira tambo, kubheka mutsetse, impregnation michina, graphitization tambo uye machining & yekuumba mutsara.
Isu takamboona mainjiniya uye akaomarara mhando kudzora system kuona mhando yezvigadzirwa zvedu.Ipowo tinogona kupa yedu nyanzvi kurongedza uye chekufambisa mhinduro.
Kambani yedu yakapihwa mazita mazhinji ekuremekedzwa senge "bhizinesi rechikwereti rebudiriro", "chengeta kondirakiti inorema bhizinesi bhizinesi", "vatengi-trust zvikamu" nezvimwewo Tinoda kupa zvigadzirwa zvekutanga-kirasi uye sevhisi kune vatengi kubva pasi rese uye uve wako akavimbika mutengesi wezvakakoni zvigadzirwa muChina.
Hebei Yidong Carbon Zvigadzirwa Co, Ltd inogara ichitevedzera kune bhizinesi mweya we "Kubudirira, hunyanzvi, kutsvaga kugona uye kuhwina-kuhwina kubatana". Tine rakasimba tekinoroji timu, yemhando yekugadzira michina uye yepamusoro inoshanda timu yekutarisira
Customers'demand ndicho chinangwa chedu. Kubudirira kwevatengi ndiko kubudirira kwedu.
Isu tinovimbisa zvakasimba:
-Kugadzira akakwana mutengi profiles, kunzwisisa mutengi kunoda kupa zvakanangwa zvigadzirwa nemasevhisi.
-Kugutsa uye kushandira vatengi'kuramba kuchikura simba zvinoda, kugadzira kwenguva refu kukwikwidza uye musika mikana yevatengi.
-Kusimbisa masangano akasarudzika ekushambadzira, kutumira, chigadzirwa chekuchengetedza nezvimwe izvo zvinogona kupa mhinduro nekukurumidza pazvikumbiro zvevatengi.
-Kubata vatengi nguva dzose, kuteedzera vatengi'usage yezvinhu zvinopihwa, zvichipa rubatsiro kumabasa ekubvunza kune izvo zvinopihwa zvigadzirwa.
-Tichapa mhinduro kune vatengi 'mhinduro mukati maawa makumi maviri nemana.
-Tinoda kuwana kuhwina-kuhwina kubatana pamwe nevatengi.
General Manager Kutaura
Kutenda nekuterera kwako uye rutsigiro kuna Hebei Yidong Carbon Zvigadzirwa Co, Ltd. Parizvino, zvigadzirwa zvedu zvakapararira kwete kwete chete pasirese nyika, asi zvakare muEurope, America, Southeast Asia nedzimwe nzvimbo, Hebei Yidong Carbon Products Co, Ltd rave rimwe remakwikwi akanakisa vatengesi muChina.Enterprises inofanirwa kuve nekwaniso yavo yepamoyo yekukudziridza nekukura yakasimba.Yedu kambani inoshandisa sainzi uye tekinoroji kuti inzwisise hupfumi hwepasi rose.
Hebei Yidong Carbon Zvigadzirwa Co, Ltd inogara inotevedzera kune bhizinesi mweya we "Kubudirira, hunyanzvi, kutsvaga kugona uye kuhwina-kuhwina kubatana" .Tine yakasimba tekinoroji timu, yepamusoro zvigadzirwa zvigadzirwa, yakakwira inoshanda manejimendi timu uye yekutanga-kirasi mushure mekutengesa sevhisi kuvimbisa mhando yezvigadzirwa zvedu.
Kusarudza Yidong ndiko kusarudza trust.We acharamba kupa yepamusoro zvigadzirwa, chakanakisisa rwokugadzira surport uye akakwana pashure-sale basa vatengi vedu.
Hebei Yidong Carbon Zvigadzirwa Co., Ltd.is inyanzvi graphite electrode mugadziri uye ekisipota kubva 2012.
Pakarepo: India's graphite electrod ...
Kuwedzera kwemitengo uye kukwana kukwana purofiti ...
The yose graphite electrode tsvimbo musika ...
Kambani yedu yatanga zvekare basa ...
The graphite electrode musika achava mainta ...